'उसको मोटोपनाले उसको जीवन छोटो पार्ने थियो' - जिम रस WWE मा बिग शो को साथ कठिन हुँदै - Wwe
'उसको मोटोपनाले उसको जीवन छोटो पार्ने थियो' - जिम रस WWE मा बिग शो को साथ कठिन हुँदै
जिम रस उस समय प्रतिबिम्बित भएको छ जब WWE ले द बिग शो को तलब लाई उसलाई तौल घटाउन को लागी प्रेरित गर्न को लागी प्रभावित पारेको छ।
अगस्त २००० देखि जनवरी २००१ सम्म, द बिग शो WWE टेलिभिजन मा देखा परेन। यसको सट्टा, उनले कम्पनीको ओहायो भ्याली रेसलिंग (OVW) विकास प्रणालीमा काम गरे जबकि उनी 400 पाउण्ड सम्म पुग्न कोसिस गरे।
मलाई जोन सीना देख्न सक्दैनन्
यो हप्ताको ग्रिलिंग जेआर पोडकास्ट २००१ रोयल रम्बल मा केन्द्रित छ, जुन बिग शो को फिर्ता फिचर गरीयो। रसले कोनराड थम्पसनलाई भने कि उनी निराश थिए कि सात फिट सुपरस्टार ओभीडब्ल्यूमा पठाइनु भन्दा पहिले उनी जत्तिकै भारी देखिए।
हो, र यो जहाँ म निराश थिएँ, कोनराड, मैले सोचे कि उसको तौल र उसको मोटोपनाले उसको जीवन छोटो पार्ने थियो। यो यसको बारेमा थिएन, 'ठीक छ, ऊ एक तूफान गर्न सक्दैन, ऊ एक tope suicida गर्न सक्दैन।' छैन s ***। म सोच्दै छु कि उहाँ एक वा दुई कदम अन लाइसेन्सबल हुन बाट टाढा हुनुहुन्छ।
यो बत्ती हैन .... #विशाल अब्स pic.twitter.com/QcoSQt0Sfn
- बिग शो पॉल Wight (WWWETheBigShow) मार्च २,, २०१
रसले भने कि उनी चिन्तित थिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका मा एथलेटिक आयोगहरु अब द बिग शो लाई कुश्ती को इजाजतपत्र दिनेछैनन्। एउटै कुरा धेरै बर्ष पहिले अर्को WWE विशाल, योकोजुना संग भयो।
जिम रस बिग शो नराम्ररी प्रभावित भएको थियो
बिग शो WCW छोडे पछि १ 1999 मा WWE मा सामेल हुनुभयो
जिम रसले यो पनि स्पष्ट गरे कि WWE लाई थोरै विकल्प थियो तर OVW लाई बिग शो पठाउनु। जबकि सजाय पूर्व WWE च्याम्पियन को तौल घटाउन को लागी डिजाइन गरीएको थियो, यसको मतलब यो हो कि उसले टेलिभिजन मा रहन बाट अतिरिक्त पैसा कमाएको छैन।
एक मात्र तरीकाले तपाइँ प्रतिभा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँ गम्भीरताका साथ लिन को लागी उनीहरुको पैसा लाई प्रभावित गर्न को लागी हो। त्यो हो। अरु के गर्न लागिएको हो? तपाइँ मलाई एक विषय लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ? तपाइँ कक्षामा जानुहुन्छ र लेख्नुहुन्छ, 'मँ कम खान्छु, म तौल घटाउनेछु, म तौल घटाउनेछु' १०० पटक? त्यसोभए, हामीले उसको ध्यान पाएका थिएनौं। अब उहाँलाई आज हेर्नुहोस्, महान देखिन्छ।
बिग शो सँधै रस को राय मा सफल हुने क्षमता थियो, तर उनले सोचे कि शो गलत मानिसहरु बाट प्रभावित भयो। उनले थपे कि मानिसहरु लाई आगामी सुपरस्टार लाई अर्को आन्द्रे द जायन्ट बन्न को लागी प्रोत्साहित गर्नु हुदैन।
कृपया ग्रिलिंग JR लाई क्रेडिट दिनुहोस् र ट्रान्सक्रिप्शन को लागी एसके कुश्ती को एक H/T दिनुहोस् यदि तपाइँ यस लेख बाट उद्धरण को उपयोग गर्नुहुन्छ।
कसरी ईर्ष्यालु प्रेमिका हुन सक्दैन
बक्स बाहिर सोच्ने तरिका
पुरुषहरुमा कम आत्म सम्मान लक्षण
हास्यास्पद कुराहरु तपाइँको बारेमा भन्न को लागी
कति लामो पहिलो डेट पछि एक केटा पाठ गर्नुपर्छ
अरु को लागी दोष लिने